Torohevitra 20 momba ny famolavolana doka tsara | Famoronana an-tserasera
Ny doka rehetra dia famolavolana ary farany lahateny. Ny doka sy ny endrika sary dia mizara ampahany tsara amin'ny endri-javatra, asa ary tanjona. Izany no mahatonga ny kalitao sy ny fahombiazan'ny doka sy ny layout tsirairay miankina amin'ny anton-javatra mitovy amin'izany. Indraindray dia nizara hevitra vitsivitsy taminao izahay avy amin'ny matihanina lehibe avy amin'ny bilaoginay, saingy tsy mbola nitodika tany amin'ny dokam-barotra mihitsy izy ireo.
Izany no antony aniriako androany hizara aminao tsy misy hafa ary tsy kely noho ny Torohevitra 20 momba ny fanaingoana ary izany dia hanampy anao hanana hevitra vitsivitsy momba ny fampandrosoana ny doka hita maso:
Manana hevitra: Ny rafitsary hita maso dia mety ho tsara tarehy ary manana famoronana avo lenta isika amin'ny resaka hatsarana, fa ny marina dia izany rehetra izany dia mety ho lasa setroka fifohana sigara rehefa ao ambadiky ny fampihetseham-batantsika dia misy banga ny lahatsoratra. Noho io antony io dia tena zava-dehibe ny hamolavolana ny hevitsika alohan'ny hamoronana ny doka.
Ny fifampiresahana dia tsy fanaingoana: Ny haingon-trano dia midika hoe estetika amin'ny vidin'ny fiasa. Izy io dia momba ny fandrakofana andiana fiasa ary amin'ny fiafarana mahafinaritra sy mirindra indrindra azo atao. Raha misalasala ny amin'ny maha-zava-dehibe ny singa iray ianao dia esory tsy ho ao anaty ny fifangaroanao.
Mampiasà fiteny hita tokana: Ny momba izany dia ny fakàn'ny mpandray antsika ny hafatra ka noho izany dia tokony hiasa amin'ny loharanom-pahalalana azo fantarina aloha isika.
Endri-tsoratra roa na farafaharatsiny telo, ny ankamaroany dia mety hiteraka olana amin'ny fahatakarana.
Ampiharo ilay totohondry iray-roa: Mampiasà singa izay tsy azo ihodivirana hisarika ny saina sy hisarika ny saina. Mety amin'ny alàlan'ny singa lehibe na koa io miteraka resabe. Amin'izany fomba izany, amin'ny voalohany, dia hanomboka hijery ary raha sahy isika dia hitandrina ny hitazona izany fiheverana izany ary hanohy hamaky ny lahatsoratray ny mpanaraka antsika.
Misafidiana loko ho an'ny tanjona: Na ny endritsoratra na ny loko, ny endrika, ny endri-tsoratra ary ny toerana dia tsy maintsy misy antony. Aza atao kisendrasendra, mitady matihanina sy mirindra.
Raha mahavita azy amin'ny kely ianao dia mitadiava azy!
Ny habaka banga dia majika, tsy maintsy mamorona azy ianao fa tsy mameno azy. Rehefa dinihina tokoa, izay omen'ny faritra tsy dia matevina dia fampiononana. Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa dia afaka mivezivezy amin'ny lahateny amin'ny filaminana sy fitoniana tanteraka.
Raiso ho toy ny sary ny lahatsoratra, singa iray mitovy lanja aminy. Miverimberina fa tena izy, ny typography dia tena zava-dehibe ary tokony hilaza mihoatra ny lahatsoratra aza.
Lasa mpinamana ihany ny typography rehefa ataontsika hoe sariaka. Midika izany fa na ny foto-kevitra, ny toerana na ny loko dia samy tsy maintsy mizara toetra, endrika ary foto-kevitra. Amin'izany dia ho tonga iray manontolo izy ireo.
Mahaiza manerantany tadidio fa tsy natao ho anao ny famolavolana. Anisan'izany ny sary malalaka izay azon'ny rehetra takarina sy takarina. Mankany amin'ny koba ianao, aza adino.
Fifanarahana sy misaraka: Izy io dia fomba iray hanomezana laharana sy hanafarana ny lahatsoratra sy ny habaka. Amin'ny farany, ny filaminana, ny fahombiazana ary ny fahadiovana no singa tena ilaina.
Mizara hazavana sy haizina: Ny famoronana fifandanjana amin'ny ambaratonga rehetra. Ity koa dia misy ny fitsaboana ny hazavana izay afaka manome antsika rafitra vaovao sy faritra vaovao.
Makà fanapahan-kevitra ary ataovy amin'ny tanjona izany. Farany, io dia momba ny ezaka rehetra ataontsika ao anaty fonosana iray. Amin'izany fomba izany dia hisy dikany ny zava-drehetra ary hanana axis.
Refesina amin'ny masonao: ny endrika dia hita maso. Ny fampiasana ny lalao optique sy ny famoronana illusions optique dia mety ho safidy iray, miankina amin'ny toetran'ny tetikasanao io. Miezaha mamorona zavatra manaitra ny masonao.
Ataovy am-boalohany, aza asiana formula. Amin'izao fotoana izao dia mora ny manao kopia sy manodina ny fizotran'ny famoronana noho ny fahazoana miditra amin'ny karazana atiny rehetra. Aza lavo amin'ity hadisoana ity, manaova zavatra avy ao anaty. Mety misy fitaomana avy amin'ny mpanakanto hafa na ny sangan'asa fa tsy maintsy misy ny fitombokao manokana.
Adinoy izay lamaody. Ny lamaody dia mihelina ary mandrisika ny serialization ny vokatra sy ny tetikasa.
Mivezivezy, mankaleo ny static. Zava-dehibe ny hahalalanao ny fitsipika mifangaro ary andramo hampiasa azy ireo ho tombontsoanao.
Avereno jerena ny tantara fa aza adika izany: Jereo, tsidiho, vakio ary zahao. Hankasitraka hatrany ny talentao izany ary hahazo background lehibe ianao.
Symmetry no ratsy indrindra. Tokony hiaiky isika fa tena misy ifandraisany io, saingy amin'ny tranga maro, ny symmetry dia mitovy amin'ny statism, zavatra tiana hialana amin'ny vidiny rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Torohevitra 20 amin'ny famolavolana doka tsara